मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिकाङ्ग्रेसीलाई प्रश्न
खै कन्टिर–बाबूलाई आज एकाबिहानैदेखि के भएको छ ? काङ्ग्रेसीलाई खोजी–खोजी गाली गर्दैछन् । खासमा उनलाई काङ्ग्रेसीमाथि किशुनजीलाई नसम्झेको अनि खाली भजाएरमात्र खाने गरेकोमा झोँक चलेको छ ।
सन्त नेताको आदर्श र सिद्धान्तको अनुशरण नगरी काङ्ग्र्रेसी नेता सत्ताका लागि मात्र मरिहत्ते गरेको देख्दा कन्टिर–बाबूलाई उदेक लाग्या’छ । त्यो त अहिले पनि देखियो । ‘ओलीगमन’को विरोध गरी संविधान जोगाउने कार्यमा जुट्नुपर्ने अप्ठेरो बेलामा केही काङ्ग्र्रेसीहरू चुनावको चास्नी सम्झेर ‘र्‍याल’ काढ्दै छन् ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– अरे यार ! पहिला संविधान, लोकतन्त्र र सङ्घीयता जोगाऊ, चुनावको कुरो त अलि पछि पनि हुन सक्छ । कन्टिर–बाबू लामो सुस्केरा तान्दै थप्छन्– राजनीतिक निष्ठा र इमानदारीको खडेरी परेको बेलामा हामी कसैले पनि मति बिगार्नु हुँदैन । आज सन्त नेता किशुनजीको ९७औँ जन्मजयन्तीको दिन हो । आजको दिन सबैले राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी र लोकतन्त्रविरोधी तत्त्व अन्त्यका लागि किशुनजीबाट प्रेरणा लिनु जरुरी छ ।
कि कसो काङ्ग्र्रेसी हो ?
काङ्ग्रेसी किशुनजी प्रेरणा
दिमाग तातिएका ओल्बा हेतु जुडशीतलको कामना